Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 76383 Hogwarts Moment: Potions အတန်းအစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
26 / 03 / 2021 29 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 235 Views စာ0မှတ်ချက် 76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည်, Draco Malfoy, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, ပါမောက္ခ Snape, reviews, Seamus Finnigan
နိုင် 76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် ထဲကတစ်ခုအသွင်ပြောင်း ဟယ်ရီပေါ်တာအနည်းငယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာအဖြစ်စိတ်ဆင်းရဲဆုံးသင်ခန်းစာများ Lego သတ်မှတ်ထားသလား
ဒါကဒုတိယ Hogw ပါarts ခဏတာအောက်မှာသွားကြဖို့သတ်မှတ်ထားသည် Brick Fanatics မှန်ဘီလူး - ဒီမှာပထမဆုံးစစ်ဆေးပါ - ၎င်းမျက်နှာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောဆေးသုတ်သည့်နည်းဖြင့်အလွန်ဆင်တူသောအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်ကြိုးစားသည်။
မျက်လုံးနှင့်ချက်ချင်းတွေ့သည်ထက်ဤအစုအတွက်ပိုမိုများပြားသည် - ၎င်းသည် Hogw တစ်ခုလုံး၏အရောင်းရဆုံးအရောင်းရဆုံးနေရာမှအများစုဖြစ်သည်။arts ခဏအကွာအဝေး။
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - 76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် ဖြန့်ချိ: ဇန်နဝါရီလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 27.99 / $ 29.99 / € 29.99 အပိုင်းပိုင်း: 271 အသေးစားပုံများ: 3
မင်းဖတ်ပြီးပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် of 76382 Hogwarts Moment: ပြောင်းလဲခြင်းအတန်းအစားငါတို့အထူးသဖြင့်ငါတို့နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသိပါလိမ့်မယ် Lego Gryffindor အတွက်လိမ္မော်ရောင်နှင့်အတူလိုက်ရန် Group ၏ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဲအစိမ်းရောင်သည် Slytherin အတွက်စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဟုခံစားရသော်လည်း၎င်းသည်ငွေအပေါ် မူတည်၍ မလုံလောက်ပါ။ ၎င်းသည်ကျန်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သေံ sets ည့်သတ်မှတ်ထားသည့်အရောင်ကြောင့်၎င်းသည်ရှက်စရာဖြစ်သည်။
အရောင်ဖြစ်သည့်အဝါရောင်မီးလျှံကိုအကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်းကိုလည်းသင်ကျော်လွှားရန်လိုအပ်သည် Lego Slytherin ၏ပိုမိုတိကျသောငွေပမာဏအစား Group သည်စာအုပ် ၄ ခုလုံးကိုအတူတကွချည်နှောင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုအရောင်သည်အနည်းဆုံးဤမော်ဒယ်၏အတွင်းပိုင်းတွင်ထင်ဟပ်သည်၊ ဆေးရည်များ၏စာသင်ခန်းနံရံများကိုမီးခိုးရောင်ဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးပေးသည်။
အဲဒီနံရံတွေမှာလည်းရှိတယ် 76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် အကောင်းဆုံးသူ့ဟာသူ ap သတ်မှတ်art ၄ င်းတို့၏ကျောရိုးမှထွက်သွားသည့်ပုံစံအတိုင်း - အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ရိုးရှင်းစွာအမြဲတမ်းအတွင်းပိုင်းကျောဖုံးတွင်ကပ်ထားပြီးအခြားတစ်ခုမှာပိုမိုရှည်လျားသောနံရံတစ်ခုဖန်တီးရန်ချိတ်ဆွဲထားသောအပိုင်း ၂ ပိုင်းပါရှိသည် - နှင့်၎င်းတို့သည်စတစ်ကာများထက် ပို၍ အသေးစိတ်ထည့်သွင်းပုံ။
ကျနော်တို့ရှိ Lego ဤအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန် Group ၏ကျယ်ပြန့်သောရှိပြီးသားဒြပ်စင်စာကြည့်တိုက်သည်၊ ဤအတိုင်းအတာရှိဆေးရည်စာသင်ခန်းအတွက်လိုအပ်သောအရာအားလုံး - ခွက်ဖလားမှသည်အိုးများအထိ - အဆင်သင့်ရှိပြီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤအစုတွင်လည်းမှန်ကန်သည်။ ၎င်းသည်ဖွင့်လှစ်ထားသောအဆောက်အ ဦး ထက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောတည်ဆောက်မှုကိုပြုလုပ်သည် 76382 Hogwarts Moment: ပြောင်းလဲခြင်းအတန်းအစားနောက်တစ်ခါထပ်မံပြုလုပ်လျှင်ပင်စတစ်ကာများပေါ်တွင်မှီခိုနေရသည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်သည်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောတံဆိပ်များ၊ ပြားများ၏အတွင်းပိုင်းရှိသူတို့၏လိုအပ်သော (နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲသော) အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုသင်မလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။ ကရုဏာစွာဖြင့်ဒီမှာသာဓကတစ်ခုရှိသည်၊ သို့သော်သင်အမှန်တကယ်ပြုလုပ်ရန်တည်ငြိမ်သောလက်များလိုအပ်နေ ဦး မည် 76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် က box ကိုအပေါ်သကဲ့သို့ကောင်းသောကြည့်ရှုပါ။
ဒီအစုံရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုတည်ဆောက်နေစဉ်အခြား Hogw မှာတွေ့ခဲ့တာထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်artဒီတော့ဒီအတွင်းပိုင်းဟာဒီအကွာအဝေးကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းထားသလဲဆိုတာကိုပြသတဲ့စာအုပ်ထဲကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲ။ လေးခုအစုံလိုက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုလုံးတွင်ထိုအရာသည်မှန်ကန်သည်။ ၎င်းသည်နောက်တစ်ကြိမ်လက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မည်မျှဥာဏ်ရည်ပြည့်စုံစွာရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာသေးငယ်သောတည်ဆောက်သူများသည်ဤအကွာအဝေးတစ်လျှောက်တွင်သင်တွေ့နိုင်သည်ထက်ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုခံစားကြရသည်။ သင်ပုန်းနှင့် (စတစ်ကာကပ်ထားသော) စင်များအဆင်ပြေသော်လည်းစားပွဲသည်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းမဲ့ပြီး၊ ထို့အပြင်။ အားလုံး Hogw လိုပဲ - ထိုအစုတခုသည်artMoments - မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မဆိုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ပုံပြောခြင်းဖြင့်လုံးဝမောင်းနှင်သည်။
ဤ subtheme ရှိအခြားသုံးစုံသည်သင်လိုချင်သောစာရင်းတွင်ပါမောက္ခတစ် ဦး တည်းအတွက်သာဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ယင်းနှင့်မတူပါ 76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည်။ ပါမောက္ခ Snape ဖြစ်ပါတယ် နည်းပညာပိုင်း အသစ်, သို့သော်သင်ဤဗားရှင်းနှင့်၎င်း၏ယခင်နှင့်ဘေးချင်းယှဉ်။ မကြည့်ပါကသင်သတိထားမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် torso ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ကွာခြားချက်များမှာတစ်မိနစ်သာဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်စရာမှာကျောင်းသားများသည်အနည်းငယ် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်းအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ Draco Malfoy တွင် Slytherin house crest ဖြင့်အလှဆင်ထားသောကိုယ်ထည်အသစ်ရှိသည်။ Seamus Finnigan ၏မျက်နှာသည်ပျော်စရာကောင်းသော post- ပေါက်ကွဲနိုင်သော potion ပုံနှိပ်ရရှိသည်။ ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး မျှဤနေရာတွင်ကြီးမားသောမဲချခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်အသေးစားစုဆောင်းသူများသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမောင်းနှင်နိုင်သည်။
76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် သည်အခြား Hogw နှင့်အတူအဆင့်တွင်လာပါတယ်arts Moment ကိုပေါင် ၂၇.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ / ယူရို ၂၉.၉၉ ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၄ င်းတို့အားလုံးနှင့်အတူတူပင်စိုးရိမ်မှုများကိုပဲ့တင်ထပ်နိုင်သည်။ အချောထုတ်ကုန်သည်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အလွန်သေးငယ်လွန်းသည်ဟုခံစားရပြီးစတုတ္ထအသေးစားသည်တန်ဖိုးနှင့်များစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည် အဆိုပြုချက်။
ဤနေရာတွင်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ပိုမိုဆိုးရွားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသေးစားဓာတ်ပုံများသည်ဝါရင့်စုဆောင်းသူများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်artအနည်းဆုံးတော့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာအထူးလျှော့စျေးကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်arts Moments range သည်ခြစ်ရာများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောပုံဖြစ်သည်။
သင် Hogw သို့ရေငုပ်ရန်စဉ်းစားနေလျှင်arts ခဏတာတန်းလျား၊ လမ်းပေါ်ပိုကောင်းသောနေရာများရှိသည်art ထက် 76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းသည်မကောင်းသောအစုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုအများစုကိုလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ကျန်အကွာအဝေးအတိုင်းပင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအချို့သောအရုပ်များတွင်ပင်ရိုက်နှက်သည်။artments (အမည်ရ parts ကိုရွေးချယ်ရေးအဆိုပါထောင်ထဲ၏နံရံများကိုအလှဆင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်) ။
တည်ဆောက်နိုင်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းစီကိုနောက်တစ်ခုမှကောင်းကောင်းခွဲခြားရန်ကူညီသောသူတို့သည်အမှန်တကယ်အရေးပါသည့်နေရာများတွင်ဖြစ်သည်။ 76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် နည်းနည်းတိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအဓိကအားဖြင့်အသေးစားဓာတ်ပုံတွေအကြောင်းပြောနေတာပါ၊ ဒါပေမယ့်စာအုပ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းပါ ၀ င်တဲ့အလွန်သေးငယ်သောတည်ဆောက်ပုံများအကြောင်းပါ။
၎င်းသည်ဤလှိုင်းတွင်အလွယ်ဆုံး skip လုပ်နိုင်သည့်အရာကိုထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်တစ် ဦး ကိုဝယ်ယူလျှင်၎င်းအား၎င်းတို့အားလုံး ၀ ဝယ်ယူကြလိမ့်မည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
၇၆၃၈၂ Hogw တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်းarts Moment: ဆေးအဆိပ်သင့်?
76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် အခြား Hogw နှင့်အညီတည်ဆောက်ရန် ၄၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်arts ခဏတာသတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းရဲ့ကောင်းသောအတုံးစတစ်ကာများကိုစတစ်ကာများသုံးပြီးကုန်လိမ့်မည်။
၇၃၈၂၂ Hogw တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသည်arts Moment: ဆေးအဆိပ်သင့်?
76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် ၂၇၁ ခုပါဝင်ပြီးမည်သည့် Hogw တွင်မဆိုပါဝင်သည်artယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအက္ခရာများအထူးသီးသန့်ဖြစ်သည် Lego.
76383 Hogw သည်မည်မျှကြီးမားသည်arts Moment: ဆေးအဆိပ်သင့်?
76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် စာအုပ်ပျောက်သွားပြီးပိတ်လိုက်သောအခါခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၂ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၈ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၄ စင်တီမီတာရှိသည်။
၇၆၃၈၂ Hogw ဘယ်လောက်ကျလဲarts Moment: ဆေးရည်ကုန်ကျစရိတ်?
76383 Hogwarts Moment: ဆေးရည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့ပြီးယူကေတွင်ပေါင် ၂၇.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၂၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
← Lego Marvel လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်တွေ့ရသည့် Shang-Chi နှင့် Leg of the Ten Rings အစုံ
အဘယ်ကြောင့်ရွေ့လျား parts သည်မည်သည့် LEGO အစုံတွင်အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည် →